I-Waterfront Enhle Kakhulu 2 Bdrm Condo Downtown
Charlottetown, Prince Edward Island, i-Canada
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Terry & Cathy Ann
E-Waterfront eDowntown Charlottetown ku-historic Water Street. I-Premiere Luxury 2 Bdrm Ground Floor Suite.
Kulungiswe ngokuphelele ngazo zonke izinsiza ezintsha kodwa ngetimu yoqobo ye-nautical yokusetshenziswa kwasekuqaleni kwendawo. Jabulela ukubukwa okumangalisayo kwe-Charlottetown Harbour ngenkathi uziphumulele kuvulandi wakho wangasese ongasemanzini.
Ukubuka kwakho kusukela ku-Waterfront Balcony kuhamba phambili edolobheni elibheke i-Charlottetown Waterfront kanye ne-Yacht Club.
Ilayisensi yezokuvakasha #2203114
Leli gumbi lokulala le-Waterfront Luxury 2 Condo liyindawo yomqondo evulekile enazo zonke izinsiza zesimanje. Ikhishi elithi "Galley" ligcwele zonke izinto ezisetshenziswayo nezinsiza zesimanje. Hlala emuva endaweni yokuhlala enkulu ekhanyayo futhi ujabulele induduzo yale condo emangalisayo. Amakamelo amabili okulala anombhede kasayizi wendlovukazi othokomele ekamelweni ngalinye kanye nekhabethe eliningi nendawo yokugcina izinto. Igumbi lokugezela lineshawa enkulu enamathayela, ubhavu nobuze. I-Condo uma inomoya ogcwele ukuze ukhululeke futhi ujabulele. Kukhona indawo yokudlela yasekuseni enezihlalo zebha ukuze ujabulele kanye netafula elinezihlalo ezi-4 ukuze kube lula kuwe. I-balcony enkulu engasemanzini iyamangaza futhi izoba yingxenye yesilingo yesikhathi sakho osichithile kule ndlu enhle esezingeni eliphezulu.
Kukhona newasha nesomisi esithokomele ukuze kube lula kuwe. Kukhona i-smart TV kanye ne-wifi yamahhala kuyo yonke i-condo.
Le Waterfront Condo itholakala eCharlottetown Waterfront. Ungahlala kuvulandi futhi ubuke izikebhe zikaseyili nemikhumbi yokuhamba ngezinyawo.
Itholakala eduze kwe-Charlottetown Yacht Club lapho ungadla khona, uthenge, noma uphumule futhi ujabulele konke okunikezwa yi-Waterfront.
I-"Boardwalk" itholakala khona kanye ngaphandle komnyango we-condo ikuyisa kokuhlangenwe nakho okuyingqayizivele kokuhamba kuya ezintweni eziningi ezijabulisayo indawo yedolobha lase-Charlottetown okufanele izinikele.
Itholakala emabhulokhi amabili kuphela, uhambo lwemizuzu emihlanu, ukusuka eVictoria Row edumile kanye nendawo yayo yokuzijabulisa enezitolo eziningi.
Kunikezwe indawo yokupaka yamahhala.
Le Condo enhle inakho konke ukwenza iholide lakho liphumule futhi lijabulise.
Ibungazwe ngu-Terry & Cathy Ann
Sihlala esakhiweni se-condo engumakhelwane futhi sihlala siseduze uma izivakashi zidinga okuthile.
UTerry & Cathy Ann Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Charlottetown namaphethelo